निर्मल निर्मला |
प्रकाशित मिति :2017-10-15 13:37:59
संसारमा अनेकखाले मान्छे हुन्छन् । तीमध्ये कति हुन्छन्– जसले दुःखी हुँदै आफ्नो समय कुर्छन् । कति हुन्छन्– जसले चलिरहेको समयबाट आफ्नो अंश खोस्छन् । र, कतिपय हुन्छन्– जसको वरिपरि समय आफैं घुमिरहन्छ ।
निर्मला शर्माले दुःखी भएर आफ्नो समय कुरिनन् । उनले चलिरहेको समयबाट आफ्नो अंश खोसिन् । र, कहिलेकाहीँ लाग्छ– समय उनको वरिपरि घुमिरहन्छ ।
आफ्नो जिन्दगीको धार आफैं बदल्न सक्ने त्यस्ता थोरै मानिसहरूमा निर्मलाको नाम कतै न कतै आइरहन्छ । ठूला–ठूला सपना नदेखी तिनै ठूला सपनाको अंग बन्नु सजिलो पनि त छैन ।
उनले आफ्नो समाचारबारे जानकारी दिइन् । केही दिनपछि उनले समाचार कक्षमा गाइँगुइँ हल्ला सुनिन्, “निर्मलाको समाचार छापिँदैन होला ।”
उनले भनिन्, “यो समाचार त जसरी पनि छापिनुपर्छ । नछापी छोड्दिनँ ।”
निर्मलाले हाल्दिन भनिन् । कोइरालाले जिस्किँदै भने, “अब निर्मलाकै घरको नम्बर दिनु पर्ला यहाँ फोन गर्नेलाई ।”
समाचारको व्यापक चर्चा भयो । कतिले असन्तुष्टि जनाए । पार्टी कार्यालय र संसद्मा भेट हुँदा असन्तुष्टि जनाए । सुवासचन्द्र नेम्वाङ त धेरै वर्षसम्म निर्मलासँग बोलेनन् ।
रेडियो नेपाल सरकारी रेडियो । राजनीतिक चलखेल बेस्सरी हुने ठाउँ । निर्मलाको राजनीतिक पहुँच पुगेन । सरकार परिवर्तन भएसँगै उनको पनि जागिर गयो ।
समयको चक्र रोकिएन । ‘सारथि’ साप्ताहिकमा काम गरिरहेकी निर्मला फेरि रेडियो नेपाल पुगिन् । यो पटक भने उनी ‘घटना र विचार’ कार्यक्रममा गइन् ।
त्यो बेला निर्मलामात्रै होइन, धेरै फेल हुन्थे रेडियोको स्वर परीक्षामा ।
हुन पनि सत्य हो । स्वर नराम्रो मात्रै होइन, विचार, सिद्धान्त नमिल्ने र शक्तिकेन्द्रको ‘एक्सरसाइज’ नगर्नेहरू स्वर राम्रै भए पनि फेल हुने गरेका समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् ।
रेडियोमा भर्खर जागिर सुरु भएको थियो । निर्मलालाई काम सिक्नु थियो । दशैंमा घर नगई बस्दा समाचार पढ्न पाइन्छ भनेर उनी घरै गइनन् । पोखरामा त उनी सेलिब्रेटी नै भइसकेकी थिइन्, रेडियोमा बोल्ने मान्छे भनेर । गाउँमा जाँदा मान्छे भेट्न आउँथे । रेडियोमा काम गर्दाको अनुभव सोध्थे । निर्मला गजक्क पर्थिन् ।
“म घर नगएर दशैंमा रेडियोमै बोलेर बसेँ तर आमा भने म रेडियोमा बोलेको सुनेर रुनुभयो रे,” निर्मलाले विगत साटिन् ।
‘श्री सगरमाथा दैनिक’ बन्द भयो । तर, निर्मलामा पत्रकारिताको भोक मेटिएको थिएन । उनी ‘समाचारपत्र’ दैनिक पुगिन् । अन्तर्वार्तामा सम्पादकले भने, “राजनीतिक समाचारका लागि रातबिरात हिँड्नुपर्छ । तपाईं छोरी मान्छे, कसरी सक्नुहुन्छ ? भोलि विवाह होला, छोराछोरी होलान्, सम्भव हुन्छ ?”
निर्मलालाई रिस उठ्यो । भन्दिइन्, “तपाईंले मेरो बाइलाइन हेर्नुभएकै होला । राजनीतिक समाचार नै लेखिरहेको छु । सम्भव भैरहेकै छ त ।”
यति भनेर निर्मलाले फोन राखिन् । लहडी स्वभावका केशव कार्यक्रममा आउँछन् कि आउँदैनन्– केही टुङ्गो थिएन । ‘लाइभ’ कार्यक्रम भएकाले उनलाई तनाव भइरहेको थियो । बिहान पत्रपत्रिका पढिसकेर स्टुडियोबाट निस्किँदा त केशव स्थापित आएर गेस्ट रुममा बसिरहेका रहेछन् ।
निर्मलाले केशवलाई अघिल्लो दिनको कुरा सुनाइन् । उनले भने, “मेरो घरमा यस्तै समस्या छ । तपाईंमात्रै होइन, कार्यकर्ताले फोन गर्दा पनि यो समस्या आइरहन्छ ।”
“अफिसमा एकछिन हाँसो नै भयो, यो उमेरका नेताहरूलाई पनि घरमा शङ्का गर्दा रहेछन् भनेर,” निर्मलाले भनिन् ।
‘रेडियो सगरमाथा’ छिर्दा सञ्चारिका समूहकी केन्द्रीय सदस्य रहेकी निर्मला चार वर्ष त्यहीँ काम गर्दा सचिव भइसकेकी थिइन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गठन भएपिछ खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य भइन् । महासंघकाे खुलातर्फ लडेर विजयी हुने उनी पहिलो महिला केन्द्रीय सदस्य हुन् । (संघ हुँदा भने अरु पनि महिला केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित भइसकेका थिए ।) अरूको बिदा परेका दिन ‘रेडियो सगरमाथा’ले उनलाई बिदा दिँदैनथ्यो । सबैभन्दा धेरै समाचार स्रोत भएको व्यक्तिलाई रेडियोले अरूको बिदा भएको दिन राख्थ्यो । निर्मला एकातिर विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुँदै जाँदा बैठकहरूमा जानुपर्ने, अर्कोतिर रेडियोले बिदा नदिने । त्यसैले रेडियो छोडिन् । त्यसपछि भने उनले ‘रेडियो कान्तिपुर’ र ‘उज्यालो नेटवर्क’मा एउटा कार्यक्रम चलाइन् । अहिले उनी टेलिभिजन कार्यक्रम ‘समकोण’ चलाउँछिन् । सुरुसुरुमा महिलाका विषयमा के बोल्ने भनेर मुख बटार्नेहरू नै अहिले हामीलाई नबोलाउने ? भन्दै फोन गर्छन् ।
श्रोत : baahrakhari.com